वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : आगो र खरानी
२०४६ सालको गिरिजाको आगोलाई उनको सत्तालिप्साको खरानीले निभाईसकेको थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिईदिनाले गिरिजा र नेपालका सबै दलका सबै नेताहरुले राजनीतिक 'पुनर्जन्म' लिने मौका पाए। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनको अडान लिनु र २०६३ को जनआन्दोलनलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व दिनुले उनको राजनीतिक उचाई बढ्यो र जनताले पूराना कुरा पनि बिर्सिए। माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन उनले गरेको मेहेनत पनि ज्यादै प्रशंशायोग्य छँदैछ।
गिरिजाले आफूले बालेको २०६३ सालको त्यो आगोलाई जीवन्त राख्न सक्थे। आन्दोलनको समाप्तिपछिनै उनी अभिभावकको भूमिकमा सर्न सक्थे र सकृय नेतृत्वको जिम्मा नयाँ पुस्तालाई दिन सक्थे। त्यतिखेरको उनको नैतिक बलका कारण बाहिर बसेरै पनि उनी वैचारिक नेतृत्व दिनसक्थे देशको राजनीतिलाई। त्यसपछि पनि कम्तिमा संविधान-सभाको चुनाव सकिएको भोलिपल्टबाट अभिभावकको भूमिकामा बस्नसक्थे उनी। तर समयक्रमले उनमा सत्तालिप्सा झन्-झन् बढेको देखायो। माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पन उनले गरेको दीर्घ आनाकानी हामीले देखेकै छौं। केहि समययता उनको सत्तालिप्सा उनकी छोरी सुजाताका माध्यमबाट केन्द्रीकृत रुपले प्रक्षेपण भईरहेको थियो।
गिरिजाको निधनपछि देशको शान्ति-प्रकृयाले मियो गुमाएको विचार छ धेरैको। एक हिसाबले त्यो ठिकै पनि हो किनभने प्रचण्ड र माओवादीसंग भएका कतिपय कुराकानी र कथित 'मौखिक सहमति' आफूसंगै लिएर गएका छन् उनले। त्यस्ता मौखिक सहमतिलाई 'लिखित सहमति'मा उतार्न नसक्नु उनको बेईमानी र कमजोरी दुबै हो। उनले चाहेका भए त्यो अवश्य पनि सक्थे होलान्। त्यस्ता 'मौखिक सहमति' के कति भएका छन्, त्यस बारेमा माओवादीले आत्मा साक्षी राखेर जनतालाई बताईदिए देशको भलो हुनेथियो तर माओवादीबाट त्यस्तो कुराको कमै आशा गर्न सकिन्छ। त्यस्ता मौखिक सहमति हुँदै नभएको पनि हुनसक्छ। 'नेपाल' साप्ताहिकमा केहि समय पहिला एउटा लेख पढेको थिएँ मैले, नेपाली राजनीतिमा गिरिजाको शक्तिलाई नेपाल टेलिभिजनको पुरानो टेलिफिल्म "जनैको साँचो" को पर्याय देखाईएको थियो। स्थिति त्यस्तै पनि हुनसक्छ। गिरिजा हुँदा-हुँदै पनि गत एक वर्ष देखि देशको शान्ति-प्रकृया जहीँको तहीँ छँदैथियो, अझ ओरालो लागेको हुनसक्छ।
समस्या गिरिजा बाहेकका हाम्रा अरु नेताहरु पनि हुन्। आफ्ना तुच्छ आग्रह र अहंलाई त्यागेर, देश र जनतालाई सबैभन्दा माथि राखेर खुल्ला दिलले छलफल गर्न सक्दैनन् र उनीहरुलाई सधैं कोहि न कोहि 'मनिटर' चाहिन्छ। गिरिजाको उमेर र स्वास्थ्यका कारण उनको निधन अवश्यंभावी भईसकेको थियो र यो स्थितिमा शान्ति-प्रकृयालाई टुंगोमा पु-याउन उनीबाहेकको संयन्त्रको निर्माण र सशक्तीकरण भईसकेको हुनुपर्थ्यो। कांग्रेसका अरु नेता र माओवादी-एमालेले त्यो 'आँट' देखाउन सकेनन्।
एक राष्ट्रिय सार्वजनिक ब्यक्तित्व भएका कारण उनका बारेमा यति कुरा, यो बेलामा पनि, गर्ने हक म र सबै नेपाली जनतासंग छ भन्ने ठान्छु म।
फेरि एक पटक हार्दिक श्रद्धाञ्जली ब्यक्त गर्दै उनको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दछु।
गिरिजाबाट हामीले र विशेष गरी हाम्रा नेताहरुले सिक्नसक्ने कुरा धेरै छन्, जसमा सबैभन्दा प्रमुख वैचारिक-राजनैतिक अडान हुनसक्छ। उनको जस्तो दृढनिश्चय र ईच्छाशक्ति हरेक नेतामा हुनु अनिवार्य छ।
Posted by Basanta at 11:59 PM
Labels: श्रद्धाञ्जली, समसामयिक
दिनेश राज March 22, 2010 at 2:29 AM
बिगतका सबै कुरा बिर्सने र पछिल्ला केहि चरण मात्र याद गर्ने हो भने अहिलेको परिस्थितिमा देशले गिरिजा गुमाउनु देशको र हाम्रा लागि केहि अप्ठेरो परिस्थितिनै हो झैं लाग्छ तर अरु पार्टी छोडेर काँग्रेसको मात्र कुरा गर्ने हो भने काँग्रेसले जहाँनिया बाट मुक्ति पायो ।अब हेरौं काँग्रेसको रुप र भबिष्य कस्तो हुने हो ?
नयां लाउरे (Naya Laure) March 22, 2010 at 4:34 AM
दूर्जेय चेतना March 22, 2010 at 6:42 AM
यथार्थ कुरा लेख्ने वानी तपाईको यहाँ नेर पनि प्रश्ट भयो। साह्रै सही कुरा लेख्नु भयो। गिरीजा प्रतिमेरो पनि यस्तै धारणा छ। तर म उनलाई ब्यत्तीगत रुपमा राम्रो नेता मान्दिन् । प्रजातन्त्र पछि आज देश जुन हालतमा गुज्रीएको छ त्यसको महत्वपुर्ण कारक गिरिजानै हुन। आज सम्म देश बनाउने मौका यदि कसैले पाएको थियो भने गिरिजाले नै हो। तर उनले कहिलै पनि राजनेताको जस्तो ब्यवहार गरेनन् र यो मौकालाई उपयोग गर्न पाएनन्।
तपाई मान्नुस वा नमान्नुस यदी स्बस्थले साथ दिएको भए फेरी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति खाएरै छाड्थे उनले अहिले पनि।
जनता सग सघै झुटको खेती गर्ने उनी गणेशमान र कृष्ण प्रसादको लागि किन राम्रा हुन्थेर? नेपाली राजनितिमा उनले भनेको ग्राईन्ड डिजाईनको रहस्य यस्तै एउटा उदाहरण हो।
पछिल्लो पटकको पुत्री मोहले त झन उनी उमेरले नै र लामो समय राजनितीमा बिताएको कारणनै सबैको मुली बनेका रहेछन् भन्ने कुरा प्रश्ट भयो।
बाकी मलाई त कस्तो लाग्छ भने, माओबादीलाई मुलधारमा ल्याउन उनले गरेको योगदानको आज निकै चर्चा हुन्छ तर राजाले नलत्याएको भए गिरिजा माओवादीसगँ मिल्ल सायदै जान्थे होला। नत्र आफू सत्तामा बस्ता कति मौका पाए उनले तर खै? क्षमता गिरिजाको हैन माओबादीको उपयोगीताको राजनितिमा फसेका हुन गिरिजा बाबु।
त्यसैले मैले आफू प्रजातन्त्रमा बिश्वास गर्ने भएर पनि गिरिजालाई कहिलै पनि राजनेता मान्ने कारण देख्दिन। तर म त उनलाई नेपाली काग्रस भित्रका एक तनाशाहकै रुपमा हेर्छु। उनले गरेको काम पार्टी भित्र कुनै तानाशाहले गरेको भन्दा कम रहेन।
उनको आत्माले सान्ती पाओस।
यहाँ नेर फेसबुकको एउटा कमेन्ट याद आयो : गिरिजा एक कुसल नेता थिए असल थिएनन | बाँकी अरु नेपाली नेता यी दुवैकुरामा गिरिजाको लेबल भन्दा माथि उठ्न नसकेकोले पनि गिरिजा फेम यति बढेको होला शायद |
अनि जब सम्म गिरिजा भन्दा कुसल र कमसल अर्को जन्मिदैन ... शायद उनको चर्चा सँधै भैरहने छ ...खरानी भैसके पनि
kshama March 22, 2010 at 1:27 PM
Meri orse bhee bhavbheeni shradhanjali...
Dilip Acharya March 22, 2010 at 2:58 PM
मानिस एउटा निश्चित उमेरमा पुगेपछि 'परिपक्व' भएजस्तै पुरै समाजको 'सामुहिक सोच' मा पनि अबको समयसम्म पुग्दा प्रौढता आउनु पर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो ।
अस्तिदेखी मेरो मनमा कुनै एउटा तेस्रो दर्जाको हिन्दी फ्लिमको संबाद बारम्बार गुञ्जीएको छ : "मरने के बाद सब आदमी अच्छे हो जाते है" ।
जीउँदो हुने बेलासम्म हरेक कुरामा सराप्ने र मर्ने बित्तीकै भयंकर गल्तीलाई पनि बिर्सेर "अच्छा आदमी" बनाउने समाजका वेहोस समुहको बिचारसंग म पनि कहिल्यै मिल्न सक्दीन ।
मैले उनको योगदानको अवमूल्यन गर्न खोजेको हैन तर उनको बारेमा यसरी नै यथार्थको धरातलमा बसेर नै लेखाजोखा गरिनु पर्छ ।
अहिले आएर हिँजोका उनका कट्टर विरोधिहरु नै उनलाइ "अच्छा आदमी" प्रमाणीत गर्न जोडतोडले लागेका छन। जीउँदो रहँदा नै उनले भनेको मानेको भए वा उनको "अच्छा काम" मा सहयोग गरेको भए सायद आज उनको निधन पछि उनलाई असल नेता भएको प्रमाणीत गरेर बर्बराउन मात्रै पर्दैनथ्यो होला ।
मिलनजीको माथीको टिप्पणीले पनि धेरै सत्यता बोलेको छ ।
अन्तमा उनको आत्मको चिर शान्तिको कामना गर्दछु ।
Dhruba Panthi March 22, 2010 at 8:39 PM
आफूले बालेको आगो आफ्नै खरानीले निभाउने प्रवृत्ति हाम्रा नेताहरुको साझा रोगजस्तै देखिन्छ। गिरिजा त मरिहाले, बाँचेका (?) नेताहरुले Wells को भनाइ कतै पढेका/सुनेका छन् कि छैनन् कुन्नि?
ametya March 22, 2010 at 9:44 PM
सटिक र कनिका केलाइ लेख । नेपाली परिद्दश्य हेर्ने हो भने अहिलेको राजनितिमा असल र कुसल नेता बाबुराम बाहेक कोहि नि देखिन्न । बाबुराम पनि प्रचण्डले माथि आउन दिने कुरामा शंका नै छ ।
gckarki March 23, 2010 at 7:29 PM
निकै राम्रेा , एकदम गहिरिएर यथार्थ , देखेका र भेागेका कुरा लेख्नु भयेा । व्यक्ती सवै थेाक त हैन, उनका पछाडी लामेा संघर्ष वेाकेकेा पर्टी पनि त थियेा । ०६२। ०६३ केा अान्देालन अघिवाट मात्र उनले केही कुरालार्इ छेाडेर राजनेताकेा भूमिका निभाउन खेाजेकेा जस्तेा देखिएकेा थियेा । थुप्रै थुप्रै उदाहरणीय काम गरेर देखाउने मैाका पाएका उनले धेरै कुरावाट माथि उठेर राजनेता वनेर भने देखाउन सकेनन् जस्तेा लाग्छ । संधै सत्ता र शक्तीकेा मियेा वनेर वस्न रूचाउने प्रवृत्ति उनमा हावी भएकेा देखिन्थ्रयेा ।त्यसका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने उनकै पार्टी भित्रकेा अवस्था हेर्दा देखिन्छ । जे हेास् शान्ती र लेाकतन्त्रका लागि उनले खेलेकेा भूमिकालार्इ सामान्य भन्न मिल्दैन । फेरी एक पटक श्रद्धान्जली ।
Jotare Dhaiba March 24, 2010 at 8:20 PM
विश्लेषण चित्तबुझ्दो छ । यथार्थ निकै हदसम्म केलाएर विचार राख्नुभयो ।
नकारात्मक चित्रणको प्रचुरतासँगै सकरात्मक कोण पनि उप्किएको छ ।
चाहेको भए पाँच पटकसम्मको सत्तायात्रामा गिरिजाले धेरै गर्न सक्थे । सत्ता बाहिर रहँदा पनि राजनीतिक घेरा आसपासमै खिचाउन सफल उनले बाहिरबाटै पनि विशेष भूमिका खेल्न सक्थेँ । अडानमा टिकाउ भए पनि त्याग र मोहरहित राजनीतिमा कोल्टे फेर्न नसकेका कारण उनको योगदानलाई शत प्रतिशत रूपमा आँक्न नमिली अंशमा लिनुपर्ने भयो । यद्यपि गिरिजा नेपाली राजानीतिको समुद्रबीचमा टापु थिए । यो स्विकार्नैपर्छ ।
Ashesh March 25, 2010 at 2:44 PM
लेख्दा आत्मा साक्षी राखेर लेख्नुपर्छ । आफ्नो लेखनले आफ्नै विचारलाई सम्मान गर्न सकिदैन भने त्यो लेख फगत अर्थहिन अक्षरहरूको महल मात्र हुन्छ अरू केहि हुँदैन । वसन्तदाजूको लेखनशैलीवाट मैले सिकेको कुरा हुन् यी । एकदमै दमदार र ओजपूर्ण लाग्यो विचार । म काहिँपनि असहमत हुन सकिन । ध्रुवजीले आफ्नो लेखमा भन्नुभए जस्तै हामी आलोचना गर्दा र स्तुति गर्दा सन्तुलन गुमाउने गर्छौँ । गिरिजावावूको निधनमा पनि त्यहि भएको हो । यस्तो शोकको घडिमा मानिस भावुक हुनु स्वभाविक हो तर भावनामा वगेर सहि गलत नै छुट्याउन नसक्नेगरि विवेकशून्य हुनु पक्कै राम्रो हैन । गिरिजावावूलाई श्रद्धाञ्जली ।
badri March 26, 2010 at 4:44 PM
लेख एकदम रोचक र यतार्थ छ ।
badri March 26, 2010 at 4:45 PM
लेख एकदम रोचक र यथार्थ छ ।
Chaitanya March 26, 2010 at 10:50 PM
लेखले गिरिजाप्रसादको भूमिकाको बारेमा निकै गम्भीर सबालहरु उठाएको छ, जो निकै मननयोग्य छन् | प्रजातन्त्रका लागि जीबनभरि नै लडे पनि दलभित्र प्रजातन्त्र चाहिने कुरो उनलाई कहिल्यै थाहा भएन| बिशेष गरी २०४६ सालको आन्दोलनपछिको पहिलो निर्बाचित सरकार बनाउंदाको बेलाको उनको असहिष्णु ब्यबहारले भर्खर भर्खर आएको प्रजातन्त्रलाई भाँड्ने काम गर्यो |
उनले प्रतिपक्षमा बसेर खेलेका प्राय: सबै भूमिका ठीक छन् , तर कुर्चीमा बसेर खेलेका राजनीतिक भूमिका धेरैजसो बिबादास्पद छन् | आफू बाहेक अरुले पनि केही गर्न सक्छन भन्ने उनलाई लाग्दो रहेनछ र त्यो कुरालाई फेरि धेरैले मान्दा पनि रहेछन, यहि कुरो अचम्मको छ |
Basanta March 30, 2010 at 12:25 AM
प्रतिकृयाका लागि यहाँहरु सबैलाई सादर धन्यबाद!
prem ballabh pandey April 10, 2010 at 12:01 AM
Our countries`s political scenario seems to be an area engulfed in conflicts and our party leaders as the heads of different gangs ,fighting with each-other without any vision of future.